साउदीमा मुस्लिम युवतीलाई आँखा झिम्काएपछि जेलमा पर्ने नेपाली युवक को हुन ? – GALAXY
साउदीमा मुस्लिम युवतीलाई आँखा झिम्काएपछि जेलमा पर्ने नेपाली युवक को हुन ?
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरब पुगेको १९ महिनापछि ओखलढुङ्गाका २७ वर्षीय मन्दिप तामाङ (नाम परिवर्तन) जेल परे ।
एक मुस्लिम युवतीलाई आँखा झिम्क्याएपछि उनी जेल परेका हुन् । जेल परेको कुरा परिवारका सदस्यलाई थाहा भएन ।
तामाङ साउदीको जेद्दा शहरको एक मार्बल कम्पनीमा भ्यान ड्राइभर थिए । जेद्दा शहरको मुख्य सपिङ मलमा सामान पुर्‍याउन जाँदा मुस्लिम युवतीलाई आँखा झिम्क्याउँदा उनी फन्दामा परे ।
गत साता नेपाल फर्किएका उनी अहिले नयाँ बसपार्कस्थित एक होटलमा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । उनी मंगलबार घर फर्कँदै छन् ।
‘सपिङ मलको चौथो तलामा एउटी मुस्लिम युवतीले हाँस्दै मलाई हेरिन् । उनी पटक–पटक हाँसिन् पनि । मैले पनि जवाफी मुस्कान फर्काउँदा फन्दामा परे,’ उनले घटना सम्झँदै भने, ‘मैले आँखा झिम्क्याएको बेला उसको बाबुले देखेछ ।
सपिङ मलको सीसी क्यामेरामा हेरेर पार्किङमै सुरक्षा गार्डले समाते । त्यसपछि सिधै जेल लागे । प्रहरीले किन समाते भन्ने कुरा जेल पुगेपछि मात्र थाहा पाएँ ।’ त्यसपछि तीन महिना जेल परेर छुटेको उनले बताए । उनी मे महिनामा जेल परेका थिए ।
आफूलाई साहुले नै जेलबाट छुटाएको उनको भनाइ छ । ‘मुस्लिमको ठूलो चाड इद आउन लागेको थियो । मैले काम गर्ने कम्पनीको साहुको छोरो अध्यागमन प्रहरीमा कार्यरत रहेछन् ।
मलाई साहुले नै जेलबाट छुटाउन पहल गरे,’ उनी भन्छन् । साहुले छोराको सहयोगमा ‘यसको आँखा झिम्क्याउने बानी छ’ भनेर सिफारिस गरेपछि जेलबाट छुटेको उनले बताए ।
‘मलाई साहुले जेलबाट निकालेर सिधै विमानस्थल ल्याएर घर पठायो । जरिवानाचाँहि तिर्नु पर्‍यो कि परेन थाहा छैन,’ उनले भने, ‘साहुले ठूलो गुन लगाए । साहुकै कारण धेरै जेलमा बस्नु परेन । नत्र कति वर्ष जेल बस्तुपर्थ्यो ?’
जेलमा प्रहरीले सामान्य सोध–खोज मात्र गरेको उनले भने । त्यसपछि जेद्दाको पश्चिम जेलमा पुर्‍याएको उनी बताउँछन् । ‘साउदीमा केटीलाई फर्किएर हेर्न र हाँस्न पाइँदैन भन्ने थाहा हुँदा–हुँदै फसेँ,’ उनी भन्छन् ।
तामाङले जस्तै महिलालाई हेर्ने र जिस्काउँदा नेपाली कामदार फान्दामा पर्ने गरेका छन् । साउदीमा महिलालाई जिस्काउन र हेर्न नपाइने प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की बताउँछन् ।
उक्त अभियोगमा थुप्रै विदेशीहरू फन्दामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई आर्थिकसँगै जेल सजाय पनि हुने कार्की बताउँछन् । शिलापत्र डटकम बाट